Fitaovana fiarovana an-trano fiarovana - Hengshui Jrain Frp Co., Ltd.
Fiberglass fitaovana ho kianja filalaovana ny zaza dia azo antoka sy mahasarika ho an'ny ankizy, ary toy izany koa ny vokatra mafana toy ny kianjan'ny ankizy.
Ny fitaovana filalaovana Fiberglass dia ahitana dobo fisakafoanana, sary sokitra, fitaovana milalao rano ary sary marobe isan-karazany toy ny lohalika miondrika, helika helatra, slide mivantana, onja mihetsika, sary mihetsika, sary mihetsika misokatra, slide akaiky ary ny sisa.
Fitaovana an-tsaha Fiberglass dia vita amin'ny alàlan'ny dingana vita amin'ny tànana, miaraka amin'ny tenifototra avo lenta sy fametahana ambony, tsy mora ovaina, lamaody ary endrika lamaody. Amin'ny ankapobeny, ny papany dia mampihatra palitao gel, izay manamboatra ny masony ho tsara sy mamirapiratra. Rehefa takiana dia azo ampiasaina ny fikosoham-boto fiara ary avy eo dia mametaka ny loko vita amin'ny fiara sy varnish mba hamirapiratra.
Fitaovana kianja filalaovana Fiberglass dia azo atao ny mamolavola endrika sy loko isan-karazany. Ny endrika sarisary dia mahasarika ny ankizy avy hatrany, avelao izy ireo hiditra ao amin'ny tontolon'ny angano ary avy eo hahatsiaro azy ireo mandrakizay.
Fitaovana fialamboly fiberglass dia fitaovana fialamboly lehibe. Ankizy maro no hiara-hilalao. Ny loza rehetra dia hiteraka voka-dratsy lehibe. Koa tena ilaina tokoa ny fiarovana.
Fitaovana an-tsokosoko fibroana Jrain no mikarakara ny antsipiriany rehetra mba hiantohana ny fiarovana:
1. Ny velaran'ny fitaovan-tsarimihetsika dia tsy maintsy feno fantsom-boankazo miaraka amin'ny résin sy ny fanasitranana tsara. Ny delestazy sy ny hatevina tsy miorina dia tsy avela atao.
2. Tsy mety ny lesoka toy ny famoretana, fahatapahana, marika fanarenana miharihary, famantarana famaingoana marika, kapitsina, lakia ary crests.
3. Ny fifindrana eo amin'ny zoro dia tsy maintsy malama sy tsy mihetsika.
4. Ny efitrano anatiny dia tsy maintsy madio, ary tsy misy fampitana ny fibre. Tokony ho 0.25-0.5mm ny hatevin'ny lamba eo amin'ny gel.
Mitovitovy amin'ny fitaovana filalaovana fiberglass ho an'ny ankizy, akorandriaka fiberglass koa dia ampiasaina betsaka amin'ny fanamboarana fiara (akorandriaka, marika modely), fandidiana fitsaboana (akora fitsaboana), simika (anti-corrosion shell), sambo, switch boat, insulation shaft, trano elektrika, radar radome, sns.
Tsy misy poizina
Mamatotra fanamafisana FRP, Famolavola grating, Nohavaozina Fiberglass, hamolavola, Fitaovana fanodinam-bokatra Fiberglass, Masinina fanamafisana GRP,